अब हेटौँडा काकाकुल हुने छैन ! - Khabar Break | Khabar Break
अब हेटौँडा काकाकुल हुने छैन !
हेटौंडा, १६ मंसिर –छ वर्षअगाडिसम्म हेटौँडामा खानेपानीको हाहाकार थियो। सुख्खा मौसममा अधिकांश धारामा पानी चढ्दैनथ्यो।
पानीका लागि नगरवासीले स्थानीय कुखरेनी, राप्तीलगायत खोला किनारका कुवा तथा वरिपरिका प्राकृतिक धारासम्म धाउनुपथ्र्यो। ती खोलाहरुमा नुहाउने र कपडा धुनेहरुको भीड लाग्थ्यो। स्थानीय होटलहरुमा टिन तथा प्लास्टिकका ठूलाठूला ड्रमहरुमा खोलबाट पानी ओसारिन्थ्यो।
सुख्खायाममा मात्र हैन वर्षायाममा पनि पानीको झन् ठूलो समस्या हुन्थ्यो। वर्षासँगै आउने भेल खानेपानीको मुहानमा पस्ने र पानी धमिलो हुने समस्याले हेटौँडालाई धेरै सताएको थियो।
अहिले हेटौँडा खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष एवं पत्रकार प्रताप विष्टको मेहनत, लगनशीलता र इमान्दारीसाथ लाग्ने हो भने प्रयासबाट काकाकुल बनेको हेटौँडालाई पर्याप्त र शुद्ध खानेपानी सेवाको सुविधा सहज भएको छ।
अहिले पत्रकार विष्टलाई हेटौँडामा खानेपानीका ‘कुलमान’का पनि भन्न थालिएको छ। विष्ट नेतृत्वको खानेपानी बोर्डले पानी अभावमुक्त शहरका रुपमा परिणत गरिदिएका कारण विद्युत्भार कटौतीले दिक्क बनेका नेपालीलाई उज्यालो दिन भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङसँग विष्टको कार्यशैलीसँग तुलना गरिएको हो।
खानेपानी बोर्डका कर्मचारीहरु अध्यक्ष विष्टको दूरदर्शिता, कार्यशैली, दृढ अठोट र तत्परताका कारण कल्पना नै नगरेको परिवर्तन प्राप्त भएको बताउँछन्।
अध्यक्ष विष्ट भने बोर्डका सहकर्मी तथा कर्मचारी र विशेष रुपमा उपमहानगरपालिका र त्यसका प्रमुख हरिबहादुर महतका कारण आफ्नो नेतृत्वले खानेपानीमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको बताउछन्।
हेटौँडाको खानेपानी कार्यालय अगाडि पानीको माग गर्दै दैनिकजसो आन्दोलन र प्रदर्शन हुन्थ्यो। खानेपानीका कर्मचारीमाथि हातपात पनि धेरै हुन्थ्यो। बजारमा कुनै पनि कर्मचारीले आफूलाई खानेपानीको कर्मचारीका रुपमा परिचय दिँदैन थियो।
तर आज हेटौँडामा एक प्रकारको चमत्कार भएको छ। अचेल खानेपानीका कर्मचारी खानेपानीको कर्मचारी भनेर सबैले चिन्नेगरी बनाइएको ड्रेस लगाएर हिँड्छन्। आफूलाई खानेपानीको कर्मचारी भनेर चिनाउन पाउँदा र ड्रेस लगाएर हिँड्न पाउँदा गर्व लाग्ने बताउँछन्।
खानेपानी संस्थानमार्फत खानेपानी बोर्डलाई हस्तान्तरण भएर आएपछि हेटौँडाको खानेपानी वितरणमा चमत्कारिक परिवर्तन आएको हो।
बोर्डलाई हस्तान्तरण हुनुअघि हेटौँडामा खानेपानी संस्थानका करिब आठ हजार ग्राहक थिए। कर्मचारी थिए ७० जना। तर न त पानी पर्याप्त आउँथ्यो, न त आएको पानी नै खान लायक हुन्थ्यो। आज अवस्था फेरिएको छ। हेटौँडाको खानेपानी वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा हेटौँडा खानेपानी बोर्डमा आएपछि बोर्डले खानेपानीको वितरणलाई मात्र चुस्तदुरुस्त बनाएन ग्राहकको सङ्ख्यालाई दुई गुणाभन्दा बढीले बढाएर १७ हजार ५०० पुर्यायो। तर कर्मचारी सङ्ख्या भने घटाएर ४९ मा झार्यो।
खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तिनै व्यक्ति छन्, जो विगतमा संस्थानमार्फत खानेपानीको काम हुँदा सहायक प्रमुखका रूपमा काम गर्दथे, सुदर्शन ढकाल। ढकाल, तत्कालीन समयमा चारपटक कार्यालयमा थुनिएका थिए तर आज हिजोको दिनमा उनलाई गालीगलौज गर्नेहरु उनको प्रशंसा गर्छन्।
बोर्ड अध्यक्षको दूरदर्शिता र सदस्यहरुबीचको संयोजन, कर्मचारीको इमान्दारपन, शीघ्र एवं सही निर्णय तथा कार्यान्वयनमा तत्परता र कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप नहुने हो भने परिवर्तन सम्भव रहेको कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाइ छ।
खानेपानी बोर्डका सूचना अधिकारी सञ्जय न्यौपानेका अनुसार हेटौँडा खानेपानीको इतिहास एउटा कुवाबाट शुरु भएको थियो । उहाँका अनुसार त्यसबेला पानी खानका लागि हेटौंडा–१ स्वर्गलोक भन्ने ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिले निर्माण गरेको साधारण कुवा थियो। मानिसहरुले त्यही कुवाको पानीबाट खानेपानीको निर्वाह चलाएका थिए।
पछि हेटौँडाको बस्ती विस्तारसँगै हेटौंडा–२ त्रिभुवन राजपथको टुल्के धारा ९हाल तिरतिरे धारा० बाट पाइपको माध्यमबाट पानीको व्यवस्थापन गरिएको थियो।
सानो बस्तीका रुपमा रहेको हेटौँडा बजारीकरणतर्फ लम्कँदै थियो। बसोबास बढेसँगै बिस्तारै घरहरु बढ्दै गए र मानिसको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो।
हेटौँडा खानेपानी विभागबाट २०२४ सालमा हेटौँडा–२ हरिकुञ्जमा पाँच लाख ४६ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरी तत्कालीन हेटौँडाबाट ६ किलोमिटर टाढा भँैसेगाउँ पञ्चायत ९हाल भीमफेदी गाउँपालिका० वडा नं ७ बुङ्गदोलबाट आठ इन्चको पाइपबाट पानी ल्याएर हेटौँडावासीलाई पानी खुवाउने कार्यको शुरुआत गरिएको थियो।
करिब एक हजार ३०० धारा जडान गरी खानेपानी विभागबाट दिइँदै आएको सेवाको २०४० बाट भने व्यवस्थापन परिवर्तन भई खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानबाट यसको व्यवस्थापन हुन गयो। पछि २०४३ सालमा हरिकुञ्जमै पाँच लाख लिटर क्षमताको अर्को ट्याङ्की र कार्यालय भवन निर्माण भयो। साथै हेटौंडा–४ कर्रामा दुईवटा वेल निर्माण भएको थियो।
विसं २०४६ मा संस्थाको नाम परिवर्तन गरी नेपाल खानेपानी संस्थान राखीहेटौंडा आम उपभोक्तालाई खानेपानीको सेवा दिइँदै आएको थियो।
सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा २०५० मा हेटौँडा–८ कमाने र २०५८ मा हेटौँडा–९ लामसुरेका बासिन्दाले सञ्चालन गरेको खानेपनी सेवा प्रणाली यस संस्थानमा गाभियो। पछि हेटौँडा विकसित बन्दै र बजार बढ्दै गयो।
व्यापक जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि खानेपानीको माग पनि अत्यधिक हुँदैगयो। उपभोक्ताको मागअनुरुप नेपाल खानेपानी संस्थानले खानेपानी सङ्कलन, उत्पादन र वितरण गर्न सकेन र हेटौँडामा पानीको समस्या दिनानुदिन बढ्दै जान थाल्यो।
नगरमा खानेपानी समस्या बढ्दै गएपछि हेटौँडा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख डोरमणि पौडेलको पहलमा नगरपालिकाले एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब रु १९ करोड बराबरको आयोजना सम्पन्न गर्यो। यस योजनाले भने हेटौँडालाई केही राहत दियो यद्यपि हेटौँडाको खानेपानीको माग तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै थियो।
मधेश आन्दोलनपछि हेटौँडामा बसाइँसराइका कारण खानेपानीको माग दोब्बर भयो। खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भयो। बोर्डले २०६४ सालदेखि नै आफ्नो क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदै गएको अवस्था थियो।
नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल खानेपानी संस्थान हेटौँडा शाखा विधिवत् रुपमा २०७० जेठ ८ गतेका दिन हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तानान्तरण भएको र यसै दिनदेखि बोर्डले विधिवत् रुपमा हेटौँडा नगरक्षेत्रको खानेपानी वितरण प्रणाली सञ्चालन गरेको थियो।
बागमती प्रदेश कोरोना निको हुनेको संखया २८ पुग्यो
कोरोनालाई जिते उत्तरी मकवानपुरका ७ वर्षिय बालकले
हेटौँडामा भुकम्पको धक्का
हेटौँडा चौकिटोलकी महिलाले कोरोनालाई परास्त गरिन्, भोली डिस्चार्ज हुने